‘कहीँ कतै’ को ट्रेलर रिलिज, पिडामा हिरो-हिरोइन ! « Ramailo छ
‘कहीँ कतै’ को ट्रेलर रिलिज, पिडामा हिरो-हिरोइन !
साउन २५ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘कहीँ कतै’को अफिसियल ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । ट्रेलरमा नवकलाकारद्वय सोनम बरफुङ्गपा र सिवानी गिरीसँगै नायक दिलीप रायमाझी, किशोर खतिवडा, उमा ’बेबी’ गिरी लगायतलाई समेटिएको छ । ट्रेलर हेर्नुस् :
ट्रेलरबाट फिल्ममा रोमान्स र वियोगको कथा रहेको अड्कल काट्न सकिन्छ । नायक रायमाझीका आँखामा आँशु र सोनम र सिवानीको रोमान्स छ । सिभानी र सोनमले यहि फिल्मबाट नेपाली फिल्ममा डेब्यू गरेका हुन् । सिक्कीम स्थायी घर भएकी नव-नायिका गिरी मिस भारत र मिस हिमालयनमा फस्ट रनरअप भएकी थिइन् । हाल उनले अन्य दुई फिल्ममा पनि अभिनय गरिरहेकी छिन् ।
शिव ढकाल र बाबु श्रेष्ठको छायांकन रहेको फिल्मलाई अर्जुन जिसीले सम्पादन गरेका छन् । द्वन्द्व निर्देशन रोशन श्रेष्ठको रहेको छ । फिल्मका गीतमा सचिन सिंह र लक्की सिटौलाको संगीत रहेको छ । अर्जुन जिसीको सम्पादन रहेको फिल्ममा बाबु श्रेष्ठको छायांकन रहेको छ । आमा उमा र छोरी सिभानीसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
शबिर श्रेष्ठको लेखन तथा निर्देशन रहेको यस फिल्मलाई काठमाण्डौ उपत्यकामा रिच इन्टरटेन्मेण्ट र उपत्यका बाहिर एफडि कम्पनीले वितरण गर्दैछन् भने डिजिटल वितरण हाईलाईट्स नेपालले गरेको छ ।